UKUSETSHENZISWA KABUNINGI KOBUYA
Abantu bebelokhu besebenzisa uboya izinkulungwane zeminyaka. Njengoba uBill Bryson asho encwadini yakhe ethi 'At Home': “… okokugqoka kwasekuqaleni kweNkathi Ephakathi kwakungoboya.” Kuze kube namuhla, iningi loboya obukhiqizwayo lusetshenziselwa okokugqoka. Kepha isetshenziselwa i-mu ...
Kungani amaSlippers esikhumba semvu kungamaSlippers ahamba phambili wezinyawo ezibandayo
Ama-slippers amahle kakhulu ezinyawo ezibandayo enziwe ngesikhumba semvu. isikhumba semvu yisivikelo esihle futhi selokhu sagcina abantu befudumele, bomile futhi bephilile izinkulungwane zeminyaka.izakhiwo zemvelo zesikhumba semvu azigcini nje ngokuvikela, kepha ziyaphefumula futhi zikhothe ...
ZENZIWA KANJANI IZIBHODI ZEZIMVU?
Amabhuzu ezikhumba zezimvu njengoba kungaqondakala egameni yizicathulo ezenziwe ngesikhumba esitholwe ezimvwini. Lawa mabhuzu empeleni amabhuzu wesitayela se-unisex akhiwe ngesikhumba semvu esibhekene namawele esinoboya ohlangothini lwangaphakathi nendawo engaphandle eshilekile kanye ne-syntheti ...
Izeluleko ezi-4 Zokuhlanza Izingubo Zokulala Nengubo
Abantu abaningi bayakugwema ukuthenga izingubo nezingubo zoboya ngoba abafuni ukubhekana nobunzima nezindleko zokuzihlanza ngomile. Ungase uzibuze ukuthi kungenzeka yini ukugeza uboya ngesandla ungabunciphisi, futhi kufanele ...
Izinzuzo eziyishumi eziphezulu zokuba neBurrow & Fihla Isikhumba semvu
Izikhumba zezimvu ezilawula ukushisa: azisoze zikwenze ushise kakhulu noma zikuvumele ubande. Lokhu kubenza bakulungele ukuphonswa kwesihlalo, amakhava ezihlalo kanye nezipeki. Izikhumba zezimvu zilungele izingane. Abajabuleli kuphela ukuthungwa kombhoxo, kepha bayi-p ...